काठ - Print Peppermint
काठमा छाप्नुहोस्। कालातीत।
तपाईंको व्यापार कार्डहरू र अन्य ब्रान्डेड प्रिन्ट सामग्रीका लागि कालातीत सामग्री छान्नुहोस् - चेरी देखि ओक सम्म, प्रत्येक पानाको आफ्नै अनौठो ढाँचा छ।
घर / काठ
काठ व्यवसाय कार्ड (1)
काठसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
पुन: पुन: परीक्षण कागज: टिकाऊ डिजाइनरहरूको लागि द्रुत गाईड
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुसार, कुमारी कागजले पुन: साइकल गरिएको कागज भन्दा 74 35% र air 20% बढी वायु र पानी प्रदूषण गर्छ र वन फँडानी रोक्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि रिसाइकल कागज प्रयोग गर्नुको एक नुकसान फोहोर मैला हो। रिसाइकल कागज प्रसंस्करणमा प्रयोग गरिएको डिinking्कि process प्रक्रिया प्रति रिसाइकल कागजको वजन द्वारा २०% स्लज हुन सक्छ। के पुनर्चक्रित गर्छ ... थप पढ्नुहोस्
शीर्ष १० वुड बिजनेस कार्ड डिजाइन तपाईंलाई प्रेरित गर्न
त्यहाँ काठ उद्योग कार्डहरूसँग तपाईं धेरै गर्न सक्नुहुनेछ। गम्भीरतापूर्वक, कसले आफ्नो खल्तीमा पुग्न अवसर चाहँदैन जब सम्भावित ग्राहकहरूलाई भन्छ कि तपाईं उनीहरूका लागि काठ हुनुहुन्छ? राम्रो पन को लागि कसैले पनि अवसर अस्वीकार गर्दैन। तपाईंको प्रेरणाको लागि १० काठ व्यवसाय कार्ड डिजाइनहरू हेर्नुहोस्। … थप पढ्नुहोस्
राम्रो डिजाइन गरिएको वर्ग व्यवसाय कार्डमा कुनै पनि कुराले पिटदैन। यो चिच्याउँछ: "म आधुनिक व्यापार हो!" यसको फोक्सोको शीर्षमा जबकि सबका आँखामा ब्राण्डिंग लेजर बीम शुट गर्दै। ठीक छ, हुनसक्छ यसमा लेजर बीम टेक्नोलोजी छैन ... अझसम्म। तर, वर्ग व्यवसाय कार्डहरू तातो-चीज-पछि-काटिएको रोटी हो। त्यसोभए, हामीले सोच्यौं कि यी जुनसुकै पनि डिजाइन र ब्रान्डि elements तत्वहरूमा सन्तुष्ट छ। थप पढ्नुहोस्